Xa uqala iklabhu yeencwadi kukunceda ukusetha imithetho emiselweyo ukuze uqinisekise ukuba bonke abakhambeleyo bayamkela kwaye bafuna ukubuyela. Eminye yemithetho ingabonakala ngathi ingqiqo kodwa ukuqinisekisa ukuba wonke umntu usekhasini elifanayo luza kunceda ukuphepha ingxabano engadingekile.Ukuba imithetho emiselweyo ibaluleke ngakumbi xa uqala iklabhu yeencwadi evulelekileyo kuluntu jikelele. Ukuba awuyithandi ulwimi olungcolileyo, umzekelo, ibhola yencwadi eyenziwa ngabahlobo bakho kuphela mhlawumbi sele beyazi ukuphepha ukufunga, kodwa ukuba uvula iqela kubantu abangabaziyo bangacinga ukuqalekisa.
Ukuba nomgaqo kwindawo iya kwenza wonke umntu azi uhlobo lwentetho oyisebenzisayo.
Xa usenza isigqibo malunga nemigangatho yeklabhu yakho uya kufuna ukucinga malunga nohlobo lwencoko othanda ukuyenza. Ngaba ugxininise ekuhlalutyo olubi kakhulu okanye ngaba kukuzonwabisa nje? Kwakhona ingcamango enhle ukucinga ngendawo oya kubamba iqela lakho leencwadi. Ukuba udibana nenxalenye kawonkewonke njengendawo yamathala eencwadi yamathala, unokuba nemithetho yayo malunga nezinto ezifana nokuzisa ukutya okanye ukubeka izihlalo emva komhlangano . Kungcono ukuba uqaphele oku xa wenze amaqela akho alawula.
Mhlawumbi uza kuza nemithetho embalwa eyakho kodwa nolu uluhlu lwemithetho eqhelekileyo yebhulabhu yencwadi ukukunceda ukuba uqalise. Ukuba nayiphi na yale mithetho ayinakubhenela kuwe okanye uvakalelwa ukuba akufuneki ukuba iqela lakho lithandane kwaye ukhumbule into ebaluleke kakhulu yinto yonke ukuzonwabisa!
Injongo yale yebhulabhu yembali kukufunda nokuzonwabisa iincwadi! Ngoko, ukuba uyathanda iincwadi, kwaye ulungele ukuxoxa ngazo ... usekude.
Unokufumana ukuba awuvumelani nento enye ilungu leqela elithethileyo.
Kukulungele ukungavumelani nangoko nje kwenziwe ngenhlonipho.
Ukuziphatha kakubi kunye / okanye ulwimi aluyi kunyamezela.
Nceda uhlonele igunya lomodareyitha.
Gcina ngesihloko, kodwa uzive ukhululekile ukuzisa ulwazi olufanelekileyo kwingxoxo (iimbali zembali, iinkcukacha ze-bio, imvelaphi yembali, ababhali abathintekayo okanye izihloko).
Zonke iintlanganiso ziya kuqala ngexesha.
Xa uthetha, nceda usho igama lakho.
Amanye amaqela encwadi aquka ukutya okanye iziyobisi. Musa ukulibala ukuzisa ukutya kwakho okanye ukusela.
Iinkcukacha ezithe vetshe.
Iqela leNkcazo yeNcwadi yeNcwadi yeSiFundo kunye neNgxoxo
Yiyiphi impawu oyithandayo?
Yiyiphi i-Chase ye-NASCAR Sprint Cup?